Ye-Mon's Personal Pages: December 2007
ပျော်ရွှင် အောင်မြင် ငြိမ်းချမ်းသော
3 comments Labels: bird-flu, public health
1 comments Labels: bird-flu, burmese, news, public health
ဗမာ ဆွေမျိုးစပ်နည်းများမှာ အနောက်တိုင်း ဆွေမျိုးစပ်နည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အတော်ပင် တိကျသည်ဟု ဆိုသော် ရနိုင်၏။ ဘိုလို “အန်ကယ်” (Uncle) ဆိုသည်မှာ မိခင် (သို့) ဖခင်၏ ညီ (သို့) အစ်ကို (သို့) မောင် တစ်ဦးဦး ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ ဗမာလို ဆိုလျှင် “ဦးကြီး” ဟု ပြောလိုက်သည်နှင့် မိခင်၏ “အစ်ကို” မှန်း သိ၏။ ထို့အတူ “ဘဒွေး” ဟု ပြောလျှင် ဖခင်၏ “ညီ” မှန်း သိ၏။ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရှိသည်။
ယနေ့ အင်တာနက် ခေတ်တွင် လူငယ်များ အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုကို လေ့လာ၊ လိုက်စား၊ ပြောင်းလဲ ကျင့်သုံးကြရာ၌ မိရိုးဖလာ ယဉ်ကျေးမှုများထဲမှ မှန်ကန်တိကျ အသုံးဝင်သော ကိစ္စများကို မပစ်ပယ်ကြစေရန် အလို့ငှာ ဤပို့စ်ကို တင်ပါသည်။
အဖေတူ အမေတူ သားသမီးများ
မိမိသည် အမျိုးသမီး ဖြစ်ပါက ...
မိမိထက် အသက်ငယ်သော ယောက်ျားလေး ဆိုလျှင် ... မောင်
မိမိသည် အမျိုးသား ဖြစ်ပါက ...
မိမိထက် အသက်ငယ်သော ယောက်ျားလေး ဆိုလျှင် ... ညီ
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး မဟူ ...
မိမိထက် အသက်ကြီးသော မိန်းကလေး ဆိုလျှင် ... အစ်မ
မိမိထက် အသက်ကြီးသော ယောက်ျားလေး ဆိုလျှင် ... အစ်ကို
မိမိထက် အသက်ငယ်သော မိန်းကလေး ဆိုလျှင် ... ညီမ၊ နှမ
ဖခင်၏ အစ်မ ... ဒွေးကြီး
ဖခင်၏ ညီမ ... ဒွေးလေး
ဖခင်၏ အစ်ကို ... ဘကြီး
ဖခင်၏ ညီ ... ဘဒွေး
မိခင်၏ အစ်မ ... ဒေါ်ကြီး
မိခင်၏ ညီမ ... ဒေါ်လေး
မိခင်၏ အစ်ကို ... ဦးကြီး
မိခင်၏ မောင် ... ဦးလေး
ဘိုး - ဘွားများ
ဖခင်၊ မိခင် တို့၏ အဖေအမေ ... အဘိုး(ကျား)၊ အဘွား (မ)
အဘိုး၊ အဘွား တို့၏ အဖေအမေ ... ဘေး (ကျား၊မ ခွဲပုံမရ)
ဘေး တို့၏ အဖေအမေ ... ဘီ (ကျား၊မ ခွဲပုံမရ)
ဘီ တို့၏ အဖေအမေ ... ဘင် (ကျား၊မ ခွဲပုံမရ)
မြေး - မြစ်များ
မိမိ၏ သားသမီးက မွေးသော ကလေးများ ... မြေး(ကျား)၊ မြေးမ(မ)
မိမိ၏ မြေးများက မွေးသော ကလေးများ ... မြစ် (ကျား၊ မ ခွဲပုံမရ)
မိမိ၏ မြစ်များက မွေးသော ကလေးများ ... တီ (ဟုတ်ကော ဟုတ်ရဲ့လား မသိပါဘူးဗျာ)
မိမိ၏ တီများက မွေးသော ကလေးများ ... တွတ် (ဟုတ်ကော ဟုတ်ရဲ့လား မသိပါဘူးဗျာ)
တူ - တူမများ
မိမိ၏ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မ များကမွေးသော ကလေးများ ... တူ(ကျား)၊ တူမ(မ)
ဖိုး-ဖွား ချင်း တူသူများ ... တစ်ဝမ်းကွဲ
ဘေး ချင်း တူသူများ ... နှစ်ဝမ်းကွဲ
ဘီ ချင်း တူသူများ ... သုံးဝမ်းကွဲ
အဖေနှင့် အမေ တစ်ဦးသာတူသော သားသမီးများ
အဖေတူ၊ အမေကွဲ ... အကို၊ မောင်၊ နှမ၊ ညီ၊ ညီမ
အမေတူ၊ အဖေကွဲ ... အကို၊ မောင်၊ နှမ၊ ညီ၊ ညီမ
(မှတ်ချက်။ ။ ဘိုလို ဆိုလျှင် ... half cousin ဟု တစ်မျိုးတည်းသာ သုံးသည်။)
မိမိသည် အမျိုးသမီး ဖြစ်ပြီး နောက်အိမ်ထောင်ပြုပါက ...
ထိုအမျိုးသား၏ မူလ အိမ်ထောင်မှ ကလေးများမှာ ... လင်ပါ သား၊ သမီး
မိမိသည် အမျိုးသား ဖြစ်ပြီး နောက်အိမ်ထောင်ပြုပါက ...
ထိုအမျိုးသမီး၏ မူလ အိမ်ထောင်မှ ကလေးများမှာ ... မယားပါ သား၊ သမီး
မိမိ၏ မိခင်မှ နောက်အိမ်ထောင်ပြုပါက ...
ထိုအမျိုးသားမှာ ... ပထွေး
မိမိ၏ ဖခင်မှ နောက်အိမ်ထောင်ပြုပါက ...
ထိုအမျိုးသမီးမှာ ... မိထွေး
မိမိ အိမ်ထောင်ဖက်၏ အမျိုးအဆွေများ
အိမ်ထောင်ဖက်၏ အဖေအမေ ... ယောက္ခမ
မိမိသည် အမျိုးသမီးဖြစ်ပါက ...
ခင်ပွန်း၏ အစ်မ၊ နှမ ... ယောင်းမ
ခင်ပွန်း၏ အစ်ကို ... ခဲအို
ခင်ပွန်း၏ ညီ ... မတ်
ဇနီး၏ အစ်မ ... မရီး
ဇနီး၏ နှမ ... ခယ်မ
ဇနီး၏ အစ်ကို၊ မောင် ... ယောက်ဖ
စာရေးသူ ငယ်စဉ်က ဖတ်ဖူးသော “ဗမာဆွေမျိုးစပ်နည်း” (စာရေးသူအမည်မေ့၊ စာပေဗိမာန်က ထုတ်သည်ထင်) စာအုပ်ထဲမှ အကြောင်းအရာများ ကို မှတ်မိသရွေ့ ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာရှုသူ မိတ်ဆွေအများ လိုအပ်ချက်များ တွေ့ရှိပါက ဖြည့်စွက်ပေးကြပါရန် ပန်ကြားလိုက်ပါသည်။
7 comments Labels: burmese, forget-me-not, general
A man who is not married.
It isacar with seven or so seats with at least one sliding door on the side. Much more likeaTownAce or HighAce in Myanmar.
In the United States, it is mandatory to use child seats for children under6years of age or 40 pounds of body weight. We can neither let those children sit on driver's lap nor sit in the lover seat. I was surprised when I learned about that law because asakid I used to sit on my dad's lap while he was driving. Besides, lover seat is the privilege spot in the car and only the VIP in the family is allowed to sit there.
But, there are reasons behind this child-seat law. Statistics showed that lover seat is the most dangerous place inacar followed by the driver seat. Why is that? Because drivers love themselves more so than their lovers who sit in lover seats. When accident happens, driver tries to save his/her own ass and it could inadvertently hurt the person in the lover seat more. Too bad, huh? Another fair reason is that driver has more time, though it may beasplit ofasecond, than other passengers in the car right before the accident. So, s/he can prepare her/himself toasafer posture. On the contrary, the person in lover seat may be unaware of the situation and unprepared. Asaresult, s/he suffers more.
Then, air bags came along to save those beautiful souls. While air bags save lives, they can also hurt people. If it isachild, they can even kill. That's why kids are not allowed to sit in any of the front seats ofacar.
Aboutamonth ago, my friend's family arrived from Myanmar. Maung Min Thant isabright and yet talkative2year old son of my friend. To pick him up from the airport I had to findachild-seat. We were fortunate that another friend of mine whose kids were grown up gave meachild-seat. From then on, that child-seat occupies my car's back seat. Then, the van came. A Burmese couple had their van broke down and they didn't want to bother fixing it. So, they said they would give it away. Me and two other friends decided to fix it though we were not so sure what would come next. Luckily, the car became usable after spending $600 or so. We swapped vehicles and I ended up using the van. My close friend - father of two - commented that even he didn't useavan because it isatrade mark (in the US) that you have many kids. OMG .... I didn't know that.
Now, I haveavan withachild-seat in it. How could people believe that I amabachelor? :(
7 comments Labels: english, general
၅၊ ၁၂၊ ၂၀၀၇
ဓါတ်ပုံရိုက်သူ လက်ရှိ နေထိုင်ရာအိမ်၏ အနောက်ဖက် ခြံထဲရှိ ပန်းပင်လေး ဦးဦးဖျားဖျားကျသော နှင်းများကြား မြုပ်နေပုံ။
8 comments Labels: baltimore, photo, season
အခါလည် အတွေးစများကို လိုက်ဖမ်းခြင်း
ဒီနေ့ ဘာနေ့တုန်း။ ဟိုက် ... ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်။
ဟာ .. သွား .. ပါ .. ပြီ။ မနေ့က ဒီဘလောက် တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့။
ဘယ်မှာလဲ အခါလည် ကိတ်မုန့်နဲ့ ဖယောင်းတိုင်။ ကိတ်မုန့်ရှိလဲ ဘယ်သူမှမ မရှိတာ။ ဘာလုပ်မှာလဲ။ ဘလောက်ကလည်း ဖယောင်းတိုင်ကို ငြိမ်းအောင် မှုတ်နိုင်မှာမှ မဟုတ်တာ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒါနဲ့ဆို ပို့စ် ၁၀၀ လည်း ပြည့်လေပြီ။
တစ်ပတ်ကို ပို့စ် နှစ်ခုနှုန်းကျပေါ့လေ။ ပျမ်းမျှခြင်း ရှာတာက အကျင့်ပါနေတယ်။
ကာဖီ သောက်ချင်လိုက်တာ။ ဗိုက်ထဲက တဂွီဂွီမြည်နေပြီ။ အပြင်ထွက်စားရင် ကောင်းမယ်။
ဒါနဲ့ အခုရက်ပိုင်း တော်တော်အေးနေတယ်။
သူများတွေ ဘယ်လောက် ထူထူဝတ်ကြလဲ အပြင်ကို ကြည့်လိုက်ဦးမှ။
ဟာ အပြင်မှာ နှင်းတွေ ကျနေပါလား။ ခပ်ဖွဲဖွဲပဲ။
မြေကြီးနဲ့ ထိတော့ နှင်းတွေ အရည်ပျော်ကုန်တယ်။ ဒါဆို ကားကို နှင်းထဲက ကော်ထုတ်စရာမလိုတော့ဘူး။
ဒီနှစ် နှင်း စောတယ်။ မနှစ်ကဆို ဖေဖော်ဝါရီလောက်မှ။
အဖြူရောင် ခရစ္စမတ် (White X-mas) ဖြစ်နိုင်တယ်။
အပြင်မသွားခင် အီးမေးလေး စစ်လိုက်ဦးမှပါ။
ဟော ကျမ်းပြုကြီးကြပ် ဆရာမ နဲ့ တခြား ပါမောက္ခတွေ ဆီက အီးမေးတွေက တစ်စောင်ပြီး တစ်စောင်။
တော်သေးရဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ပါမောက္ခ ၇ ယောက် ဆီက ရက်ချိန်းရပြီ။
ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက်နေ့တဲ့။
ပထမဦးဆုံးပို့စ်လေးကို မဖတ်ဖူးတဲ့ ဘလောက် ဧည့်သည်များအတွက် ...
5 comments Labels: anniversary, burmese, forget-me-not, general